ka dhigi playlist iskaashi ee Spotify
Iyadoo Spotify, helitaanka iyo wadaaga liiska humongous ee tareenka ama songs by kala duwan oo farshaxan , playlists , albums , sifayn ama record calaamad waa wax fudud. Waxaan ku daboolay badan oo ka mid ah mawduucyada ee la soo dhaafay si kastaba ha ahaatee maanta waxaan rabnaa in aan ka wada hadli feature la yaab leh in wax badan ka yar ka hadlay. Dhab ahaantii, qaar badan oo ka mid ah dadka isticmaala Spotify ogaato oo ku saabsan doorasho cajiib ah iyo hal abuur leh in ay leeyihiin on Spotify. Haddii si sax ah loo isticmaalo, habkaani kor loogu qaado karaan waayo-aragnimo ah oo ku saabsan Spotify user si heer cusub wadajir.
Waxaad arki, ilaa hadda Spotify ayaa aad u qabow kuu abuuraan playlists oo markaas iyaga la wadaag saaxiibadaada laakiin arrintan feature cusub ay u gudbeen miles badan adiga oo lagu siinayo fursad u ah in ay u wada shaqeeyaan playlist la wadaago, oo ay la socdaan awoodin saaxiibadaa iyo qof kasta oo kale. Taasi waa xaq; hadda waxaad samayn kartaa playlist ku Spotify in aad wada maamuli kartaa saaxiibadaa iyo dadka kale. Ma aha in wax cajiib ah!
Waxaa lagu magacaabaa 'Iskaashiga playlist' oo ay tahay arrin fudud in la abuuro hal. Annagu waxaannu noqon doonnaa kuu dhammaan tallaabooyinka ku lug leh ka helida ah 'Iskaashiga playlist' adiga kuu gaar ah oo ka dibna waxay leeyihiin saaxiibadaa sida wanaagsan ee uu u maareeyo idin la.
1. Sida loo sameeyo iskaashi playlist Spotify ee PC
2. Sida loo sameeyo iskaashi playlist Spotify ee Android phone
3. Download music ka Spotify
Halkan waxaa ku qoran tallaabooyinka sida loo sameeyo iskaashi playlist Spotify ee PC.
Talaabada 1: Abuurista playlist ah - Waxaad abuuri karaan playlist cusub ka xoq ama shaqo la mid ah ee hadda jira.
Talaabada 2: Marka aad dooratay ama abuuray playlist ah, xaq guji saaran yahay ka dibna dhibic ka hoos menu, kaliya dooro ikhtiyaarka ah ee 'Iskaashiga playlist'. Waxaad arki doontaa in sida ugu dhakhsaha badan, waxan baad samaysay, astaanta Music Fiiro gaar ah xaq u socda si playlist ka leexin doonaa White in Green iyo in Calaamadda ah ayaa u muuqday socota, waxa uu sidoo kale.
Step3: Hadda, waxa ka hadhay in la sameeyo waa in ay la wadaagaan playlist in aad hadda uun u beddelmi ah 'Iskaashiga playlist, saaxiibadaa, si ay u awoodaan si ay u maareeyaan playlist ah, isagoo intaa ku daray ama samaynta isbeddelada tareenka on this playlist.
Si tan loo sameeyo, si fudud xaq guji playlist Iskaashiga iyo dhibic ka hoos menu, dooro ikhtiyaarka ah ee 'Share'.
Talaabada 4: Hadda, ilaa iyo inta aad raacdo tallaabooyinka kor ku siiyo si sax ah oo aad u samayseen wixii la mid ah sida tallaabooyinka aad ka codsaday in, saaxiibadaa waa in ay haatan heshay fariin la link ah playlist in aad lala wadaago iyaga. Si aad u awoodo si ay u maareeyaan playlist ah, mana ay guji lahaa oo keliya link, laakiin sidoo kale ay raacaan playlist adigoo gujinaya ikhtiyaarka 'raac'.
Sidaas, waxaa aad u tagto. Isticmaalka habkaani ma aha oo kaliya la wadaago playlist, laakiin sidoo kale waxaa ka mid ah saaxiibadaa iskaashi, dhagaysiga muusigga la wadaago ayaa qaaday cusub oo dhab ahaan noqdo mid xiiso leh oo dheeraad ah.
Wax la mid ah iyadoo la isticmaalayo app Spotify ee telefoonka aad Android aad samayn kartid?
Haa waa jawaabta. Tallaabooyinka inkasta oo ay yihiin wax yar ka duwan yahay kuwa kor ku xusan marka la isticmaalayo app Spotify siiyey. Halkan waxaa ah sidii aad u samayn.
Talaabada 1: Burcad app ee Spotify telefoonka aad Android.
Talaabada 2: From menu ugu weyn ee Spotify guriga, dooro ikhtiyaarka ah ee 'Your Music' ka dibna riix 'Playlists' doorasho ama tab.
Talaabada 3: Hadda, hoos liiska in furay ilaa iyo doorasho playlist mid aad rabto lahaa kuwa kale si ay u awoodaan si ay u maareeyaan idinla. Xusuusnow in playlist aad xulan waa in aan mid ka mid ah oo aad naftaada ku raaci noqon. Waxaa loola jeedaa in aad kaliya cusub ama playlist horeba u abuuray iyo hadda jira iyo in aad u isticmaali kartaa oo kaliya haddii la idiin abuuray by.
Talaabada 4: Marka aad soo xulay playlist ah, tuubada ama jaraa'id button menu siiyo dhinaca gacanta midigta sare ee shaashadda ah.
Talaabada 5: From hoos u soo dhaadhacay menu in aad hesho, dooro ikhtiyaarka ah ee ah 'ka dhig Collaborative' oo halkaas waxaad ugu tagaan. Waxaad hadda ku badaley playlist in si gaar ah in ka mid ah iskaashi in saaxiibbadaa oo dhanba edit karaa sidoo kale.
Talaabada 6: Mid ka mid ah wax la soo dhaafay in la sameeyo waa in ay wadaagaan playlist si aad saaxiibo u heli karaan. Waayo, kanu, u tag button isla menu in aad kaliya riixi dooro ikhtiyaarka ah 'Share'. Tani waxay si aad saaxiibo u soo diri doono link ah in mar ay guji, ay awoodi doonaan in ay wax ka bedel playlist ay taasi keentay in la dhageysto waa in oo ku riyaaqayaa.
Spotify Login Arrimaha
> Resource > Spotify > Si aad u dhig ah Spotify Iskaashiga playlist? Way fududahay